Taariikhda My Butros » 6 Su'aalo Lammaanayaasha waa in ay tixgeliyaan hor inta aanay is A Butros
Waxay sawir: Waxaad ogaaday in qof gaar ah, iyo xiriirka waa fantastic. Laakiin maxaad samaynaysaa marka aad muhiim ah oo kale oo soo jeedinaya ad- iyo samaynta ka go'antahay in ay midba midka kale…by keensashada xayawaanka la korsado? Ka hor inta aadan ku darin in eey cusub ama bisad inay noloshooda aad, fikiro in su'aalaha soo socda ee ku hay.
"Ma waxaan doonayaa in labada xayawaan rabaayad ah?"
Lahaanshaha xayawaan in aad nolosha noqon kartaa waayo-aragnimo waxtar leh iyo nolol-adkaynaya. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid qaali ah oo waqti lumis, la ASPCA qiyaasayo eey dhexdhexaad ah celcelis ahaan ku kici karaan $1,580 halkii sanno cunto, kharashka dhakhtarka, iyo daryeelka kale, halka bisad celcelis ahaan ku kici karaan $1,035 sanadkiiba. Go'aanka ah in hesho xayawaan rabaayad ah waa in labada dhinac, iyo waa in la sameeyaa muddo dheer ka hor inta aad dhab ahaantii ku darto eey, cat, ama xayawaan kale ku ah noloshaada. Maskaxda ku hay in aad kale oo muhiim ah waxaa laga yaabaa diidan in ay leeyihiin xayawaanka ah; haddii ay taasi dhacdana, ka dibna ixtiraamaan ra'yigiisa iyo tixgelin haysta off on guriga keeno xoolaha cusub. Haddii uu midkiin hore u leedahay xawayaan, markaas waa inaad tixgelisaa baahidaada xoolaha ee marka uu go'aan.
"Waa maxay nooca xayawaanka waa xaq noo?"
Haddii aad sawir jogs Saturday saaka seeraha la Labrador ah, laakiin aad muhiim ah oo kale oo ka fikiraya in kaydsato taangiga weyn leh kalluunka, markaas waxaad u baahan tahay in ay ka hadlaan nooca xayawaanka ah waxa aad labadiinnaba rabtaan. Tixgeliyaan wax xasaasiyad ah adiga ama wax kaloo muhiim ah leeyihiin, baaxadda meesha ay ku noolyihiin aad hadda, jadwalka shaqada, iyo dhaqaalaha marka la go'aaminayo on xayawaanka ah. Isticmaal fursaddan si ay ugala hadlaan size ee xayawaanka aad rabto, aad. Eyga A weyn soo bandhigi kartaa caqabado iyo kharashka badan eey dhabta yar.
"Imisa xayawaankaaga samayn waxaan rabnaa, si kastaba?"
Inta aad iyo aad kale oo muhiim ah ayaa laga yaabaa in la isku raacay nooca xayawaanka aad rabto, waxa kale oo aad u baahan tahay in aad ku heshiisaan sida badan xayawaankaaga aad rabto. Iyada oo xayawaan kasta oo dheeraad ah, Adiga ayaa ka mas'uul ah iyo kharashyo la xiriira daryeelka xoolaha ayaa sidoo kale kordhin doono. Maskaxda ku hay wax xeerar iyo sharciyo iyo in dalban karaan in la eego sida badan oo xayawaan ah oo aad ku yeelan karaan, gaar ahaan haddii aad ku jirto kirada ah.
"Halkee xayawaanka ugu noolaan doonaa?"
Lamaano qaar ka mid ah, wada nool khiyaar ah ma aha sababo badan. Haddii aad iyo aad kale oo muhiim ah ay wada nool yihiin ma yihiin, markaas waxaad u baahan tahay inaad go'aan meesha Fido ama qalafsaneyn noolaan doonaa. Tusaale ahaan, go'aan ka gaari doona in aad haysato xayawaankaaga guriga aad saaxibka inta lagu jiro toddobaadka, halka aad leedahay xawayaan aad u weekend? Marka go'aan laga heshiis, factor in jadwalka shaqada iyo guriga ee hadda jira ama guri.
"Yaa masuul ka ah daryeelka xayawaanka?"
Haddii aad iyo kharashka muhiim ah oo kale oo si joogta ah u kala jabeen, kadibna go'aaminta cidda ka masuulka ah daryeelka xayawaanka la moot laga yaabaa in. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad had iyo jeer ma siman kala qaybsan tahay kharashka, ama cid idinka mid ah haddii dhigaysa si weyn u badan oo kale oo ku, go'aan ka gaadhayso cidda bixiso biilasha caafimaadka xoolaha iyo cuntada xayawaanka waa dood ah waa in aad la yeelato kaloo muhiim ah ka hor inta aadan guriga soo cat cusub ama eey.
"Halka aan ka heli doontaa xayawaanka ah?"
Waxaad adiga iyo lammaanahaaga laga yaabaa in la isku raacay in ay ku qanciyaan hal nooc gaar ah oo xayawaanka. Laakiin halka aad ka heli doonaa eey cusub, cat, ama hamster? Waxaa laga yaabaa in mid ka mid idinka mid ah uu qabo dareenka xooggan ee ku saabsan xayawaanka guriga laga soo iibsaday dukaan ama buu lahaa. Haddii ay taasi dhacdana, waxaad u baahantihiin inaad noqon on board oo u oggol saabsan meesha aad ka heli kartaa xayawaan.
Lahaanshaha wada hadal furan oo aad xoolaha ku ool ah ee ku saabsan nooca iyo inta ay tahay tallaabo muhiim ah in aad xiriir. Xusuusnow in ay daacad ah oo ah in ay qiimeeyaan fikradaha midba midka kale ee.